အထက်ပါ အချက်အားလုံးထဲမှာ Hydrogen Peroxide ကို အသုံးပြုတဲ့ အဆင့် (၇) ကိုတော့ ဗဟုသုတအဖြစ် သိရုံသာ သိစေချင်ပါတယ်.. မတော်တဆ မျိုချမိရင် သော်လည်းကောင်း၊ အသုံးမပြုတတ်ခဲ့ရင် သော်လည်းကောင်း အန္တရာယ်တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် ၄င်း အချက်ကို ချန်လှပ်ပြီး ကျန်တဲ့ အန္တရာယ်လဲ မရှိ လွယ်ကူ သက်သာတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ပြုံးတိုင်းလှနေမဲ့ သွားဖြူဖြူဖွေးဖွေး အလှပိုင်ရှင်လေးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ James Coolridge ရဲ့ How to keep your teeth white naturally ကို ကိုးကားပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်။ ဒီပိုစ့်လေးအတွက် ပါဝင် ဆွေးနွေးပေးသော Dr. CK ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါကြောင်း…
29 Responses to “ပြုံးတိုင်းလှတဲ့သူ..”
မီးသွေးနဲ့တိုက်ရင်လည်း ဖြူတယ်တဲ့ ချောရေ ပန်းသီးက ဈေးကြီးတယ်ဟ အဲဒီပန်းသီးအစား မုန်လာဥနီပဲ ပိုစားလိုက်တော့မယ် ဟိ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ
ဟိ ပြုံးတိုင်းလှတဲ့လူဆိုလို့ များကို များ ပြောတာလားလို့ အပြေးလေး လာဖတ်တယ် ဟိဟိ ဟုတ်လဲ အဟုတ်ဘူး ရွှေချော လူဇိုး ခစ်ခစ်
ဒါပေသိ ဗဟုသုတ အနေနဲ့တော့ ဖတ်သွားတယ် သိလား
ဘုရားဘုရား စတော်ဘယ်ရီးသီးက ဈေးကြီးတယ်ရှင့် ဟင့်
တခြားဟာတွေနဲ့ စမ်းကြည့်ပါ့မယ် ဟက်ဟက်
ဒီပို့စ်လေး အသုံးဝင်တယ် ချောရေ ... ။
ကိုယ်က သွားမလှရတဲ့အထဲ သွားတိုက်ပျင်းတယ်၊ ကော်ဖီ တနေ့ ၃ ခွက် အနည်းဆုံး သောက်တယ်၊ သောက်တာကလဲ များသောအားဖြင့် ဘလက်ကော်ဖီ။ ဗမာပြည်တုန်းကဆို ကွမ်းယာလေးဘာလေးတောင် အပျင်းပြေ၀ါးသေး .... ဆိုတော့ ... အဟဲ ... ဘယ်လိုနေမလဲ ... စဉ်းစားသာကြည့်တော့။
ဒီမလာခင်တုန်းက ရန်ကုန်က သွားဆေးခန်းမှာ သွားခြစ်ပါသေးတယ်။ သွားကို ကျဉ်နေတာပဲ။ သိပ်လဲ ဖြူလှတယ်မထင်ပေါင်။ ဒီမှာကတော့ သွားဆေးခန်းတွေက ဈေးကြီးတယ်။ ကျောင်းသားဆိုရင်တော့ လျှော့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တခါမှ မသွားဖြစ်ဘူး။
ချောပေးတဲ့ နည်းတွေ စမ်းကြည့်အုံးမှ။ သံပုရာသီးနဲ့ ဆားက အလွယ်ဆုံးပဲ။ မြိုချမိလဲ အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။
ဗမာ့နည်း ဗမာ့ဟန် ကြံစုတ်တာတို့ မီးသွေးခဲနဲ့ ဆားနဲ့ တိုက်တာတို့ တမာရိုးနဲ့တိုက်တာတို့လဲ သူတို့ဆွေးနွေးခန်းထဲ ထည့်ဆွေးနွေးသင့်တယ်နော်။
ကော်ဖီကတော့ မဖြတ်နိုင်ဘူး အစ်မရယ်.....
သွားကတော့ အရမ်းဝါတဲ့ထဲတော့မပါဘူး။ ဒါပေမယ့်
ခု ဖြူတာဝါတာထက် သွားကြဲတာက ဒုက္ခပေးနေတယ်။
အဖွားကြီးဖြစ်လာတဲ့သဘောလားမသိဘူး အစ်မရယ် :D
ကော်ဖီဖျက်မယ်ကြံတိုင်းပိုသောက်ချင်လာလို့ တစ်နေ့ ၁ွခွက်တော့သောက်ရမှလေ။
မမနည်းတွေကလွယ်တယ် လုပ်ကြည့်အုံးမှ ကျေးဇူးမမ စာဖတ်ပြီမန့် မရလို့ မမန့်ခဲ့ရဖူး
ကျနော်တို့ က သွားအနည်းငယ်ဝါတဲ့ အမျိုးအစ်မရေ.. ဒါပေမယ့် ဖြူစင်နေတဲ့ သွားလေးတွေနဲ့ရယ်ပြချင်သေးဗျ...
သံပုရာသီးနဲ့ဆားရောပြီး သွားတိုက်တာ တော့ လုပ်ကြည့်ဦးမယ်.. အလွယ်ဆုံးလို့ ထင်တယ်လေ။
Baking soda နဲ့ သံပုရာသီး + ဆား ဘယ်ဟာကပိုဖြူမလဲ လို့ စဉ်းစားမိနေတယ်။
ချော....အမလည်း အဲလို လှချင်တာ....
အပေါ်က ညီမ မေဓါဝီလိုပဲ သွားမလှတဲ့ အထဲမှာ အမက ဂရုလည်း မစိုက်တတ်တော့ ပိုဆိုးတယ်
မနက်တကြိမ် ညတကြိမ် ဖလော့စ်လုပ်ပြီး သွားတိုက်တတ်တာက လွဲလို့ ဘာမှ မလုပ်....:)
ကျေးဇူး မချောရေ .. သွားလေးတွေ ဖြူဖွေးနေတာ အရမ်းသဘောကျတယ် .. လုပ်ကြည့်ဦးမယ် ..း)
သွားလှလှ လေး တွေ နဲ့သူတွေ ဆို
ဖြူဖြူလေးတွေနဲ့ အရမ်းလှချင်တယ် ..
လုပ်ကြည့်အုံးမယ်း) ကျေးဇူးဗျ ။
ဒီ ပို့စ်ကို ဖတ်ရင်း ဟိုးတုန်းက အာရောဂျံတို့ ဇီဝကတို့အပြင် တစ်ခြား မဂ္ဂဇင်းတွေက ကျန်းမာရေး ဆောင်းပါးလေးတွေကို သတိရသွားတယ်...။ မဂ္ဂဇင်း ဆောင်းပါးတစ်ချို့နဲ့ ဝေးကွာနေခဲ့မိတာ တော်တော်ကြာခဲ့ပါရောလားဆိုပြီးလည်း တွေးမိပါရဲ့..။ Anyhow, thanks နော်
အပေါ်က ကော်ဖီသမားတွေလိုပဲ၊ ကော်ဖီတော့ မဖြတ်ဘူး၊ သတ်ချင်သတ်ပလိုက်..လို့ ပြောရမယ် ထင်တယ် မချောရေ့...၊း)
နည်းလေးတွေက ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းလေး တွေနဲ့ဆိုတော့ ရိုးရှင်း လွယ်ကူတယ်နော်..၊ မျှဝေတာ ကျေးဇူးပါဗျာ။
Have you ever considered about includingalittle bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. But think of if you added some great images or videos to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and video clips, this website could definitely be one of the most beneficial in its field. Fantastic blog!
တစ်ချို့ ပစ္စည်းတွေကျ မရှိနိုင်၊ မရှာနိုင်ပေမယ့် 
ရှိနိုင် ရှာနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ လည်း
ယနေ့ မှ စ ၍ အမြဲတန်း ပြုံး ... နေပါတော့ 
ခင်တဲ့....
သွားလေးတွေ ဖြူဖြူ ဖွေးဖွေး လှပစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ ရေးတဲ့ ပို့စ်လေးမို့ သဘောတကျ ဖတ်သွားတယ်။ အစ်မချော ရေးထားတာ ဖတ်ပြီး တစ်ချက် တစ်ချက်လည်း ရယ်မိတယ် ခစ် ခစ်း)
"ဆိုင်မှာ ကော်ဖီနဲ့ လက်ဖက်ရည်ကို ပိုက်နဲ့ စုပ်သောက်ရင် ရူးနေပြီထင်တယ်လို့များ ပြောကြလေးမလား မသိနော်" "သွားချိုးတွေက အစာနဲ့အတူ ဗိုက်ထဲဝင်ကုန်ရော :) "
မနက် မိုးလင်း အိပ်ယာထတာနဲ့
ပို့ လေးကို သဘောကျလို့ 
ကော်ဖီတော့မဖြတ်နိုင်ပါ၊ စတောဘယ်ရီလောက်တော့ သုံးကြည့်မယ်
Hydrogen Peroxide ဘယ်လောက် %ဆိုတာထည့်ရေးဦးလေ အပြင်းတွေသုံးမိလို့ သွားဖုံးတွေ သွားတွေပါကြွေကြလာဦးမယ်၊
နည်းလမ်းလေးတွေက အတော်အသုံးတည့်တယ်။ သံပုရာသီးနဲ့လုပ်ကြည့်တာ သွားတော့ဖြူတယ် ချောရယ်... ဒါပေမယ့် သွားကျိန်းသကွယ် ..... ;Pနောက်နေ့ နောက်တစ်နည်းစမ်းမယ်....။
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါနော်။ စေတနာပန်းခင်းက လာလည်ရင်းနဲ့ စာလေးလည်းဖတ်သွားပါတယ်။ ဗဟုသုတရတာပေါ့။ အောင်မြင်ပါစေ။ ဒိထက်မကပေါ့။
ဆားနဲ့ သံပရာသီးနဲ့ အဲဒီနည်းလေးကို